ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: ခိုင်မြဲတဲ့ချစ်ခြင်း (၂)
ကျနော့်ရဲ့ ဘလော့လေးမှာ ကျနော့် အဘ နဲ့ အမေကိုလည်းတော်တော်များများ ရင်းနှီးဖူးနေကြတယ် ။ ခုနောက်ပိုင်း စာတွေ တော်တော် အရေးကျဲလာတော့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က ရွာအကြောင်း ၊ မိသားစု အကြောင်းလေးတွေရေးပါအုံးတဲ့ အရိုးဆုံးက အဆန်းဆုံးပါလို့ ဆိုလာတဲ့ သူ့စကားလေးကြောင့် ဒီ အပိုင်း ၂ ကို ဆက်ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီမှာ အမေ နဲ့ အဘ ရဲ့ ရိုးသားတဲ့ သံယောဇဉ်အကြောင်း ရေးဖူးသေးတယ် ။ ကျနော်ကလည်း မိဘတွေအဝေးမှာ ရှိတုန်းက မိသားစုအကြောင်း အရေးများပြီး ခုကျ မရေးဖြစ်ဘူး တကယ်က အလုပ်တွေ ရှုပ်နေလို့ပါး) စာရေးမယ် ဆိုပြီး စားပွဲမှာ ထိုင်လိုက်တာနဲ့ ခလေးနို့ဗူးဖျော်ပေးရ ငိုလို့ချော့ရ ရေချိုးပေးရနဲ့ တကယ့်ကို ခလေး အဖေကြီးကျနေတာပဲ စာလည်းမဖတ်ဖြစ်ဖူးရယ် ။
အမေ နဲ့ အဘ ဒီရောက်တာလည်း ၃ လကျော်ကျော်ဆိုတော့ အနေလေးတော့ ကျလာသား အဘ ကတော့ ပြန်မယ်ကြီး ပြောနေတော့တာ။ ပြန်ချင်တယ် ဒီမှာ ပေါက်တူးလည်း မကိုင်ရ ၊ ခြံထဲလည်းမဆင်းရ ကြာရင် သူ ရောဂါ ဖြစ်မယ်တဲ့ ပြီးတော့ မွေးရပ်မြေမှာက အဘချစ်တဲ့ သမီးတွေ ၃ ယောက်တောင် ကျန်ခဲ့တာဆိုတော့ သမီးတွေကိုလွမ်း မြေးတွေကို လွမ်းနဲ့ အိမ်လွမ်းနာ ကျပြီး ထမင်း ၃ ပန်းကန်တောင် တီးတဲ့ အဘက ထမင်းစားတွေပြတ်တော့ ကျနော့်မှာ စိတ်မကောင်းတွေဖြစ်လို့ *အမေ ...အဘက တအားပြန်ချင်နေတယ်ဖြစ်မယ် တော်ကြာ ကျန်းမာရေးမကောင်းဖြစ်လာရင် သားတစ်ယောက်တည်းလည်းမလုပ်တတ်ဘူး ဘယ်လိုလုပ်မလဲ * ဆိုတော့ အမေက နှစ်ပေါင်း ၄၀ နီးပါးလောက် ပေါင်းလာတဲ့ သူ့ချစ်ချစ်ကို အထာတွေ သိတယ်ဆိုတော့ ဒီနေရာမှာ အပျော့နည်းနဲ့ ကိုင်ရမယ်ဆိုတာ အမေက ကောင်းကောင်းနားလည်ထားတယ် * ငပေါ ရယ် ကိုယ့်သားလေးလည်း ဒီမှာတစ်ယောက်တည်း သူ့မှာ အပင်ပန်းခံပြီ မိဘကို ထားထား ပါတယ် ငပေါက ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတော့ သူ ဘယ်စိတ်ကောင်းမတုန်း မိုးတွင်းကြီး ပြန်ရင် ဟိုမှာက အလုပ်မရှိ အဆင်မပြေတဲ့ သမီးတွေဆီမှာ နေဖို့ဆိုတာ ဖြစ်ပါ့မလား စဉ်းစား ငါကတော့ မပြန်သေးဘူး အဲ့တာ တစ်ယောက်တည်း ပြန်ချင်ရင်သာ ကိုယ့်ပါသာပြန် * တဲ့ အမေသုံးတဲ့ ဗျူဟာက ခံစစ်ကော ထိုးစစ်ကော အပီကို ဆင်လိုက်တာပါ ။
အဘ ပြန်ပြောတာက * ငါ့ကို ကားပေါ်တော့ လိုက်တင်ပေးလေ* တဲ့း) အဟုတ် အဘက တစ်ယောက်တည်း ဘယ်ခရီးမှ မသွားဖူးဘူး ပြီးတော့ ဟိုရောက်လို့ အဆင်မပြေရင် ပြန်လာမှာ ပေါ့တဲ့ အမေက ခပ်တည်တည်နဲ့ သွားလိုက်လာလိုက်နဲ့ လမ်းစရိတ်တွေကုန်တယ်ဆိုတော့ * အေးအေး ဒါဆိုလည်း သတင်းကျွတ်မှ တို့လင်မယား နှစ်ယောက်လုံး ပြန်ကြတာပေါ့ * တဲ့ အဲ့တော့မှပဲ ကျနော်လည်း စိတ်အေးရတော့တယ် ။ အမေနဲ့ အဘကို ကျွေးချင်ရင် ခလေးတွေကို အရင်သိပ် ပြီးမှ ကျွေးရပါတယ် မဟုတ်ရင် အမေနဲ့ အဘက သူတို့ဝမ်းထဲမရောက် ခလေးတွေကြီးကျွေးနေရတာကိုး လူကကြာတော့ စိတ်ကောက်ချင်လာပြီ * အဲ့မှာပဲ ကျွေးနေ သားက အမေတို့စားစေချင်လို့ ကျွေးပါတယ်ဆို ဒီခလေးတွေက တစ်မှောင့် * ဆိုတော့ အော် ... ဘယ်စားလို့ ကျပါ့မလဲကွယ် တဲ့ ။
အအေးလေးတစ်ဗူး လောက် အဘကို ၀ယ်တိုက်တဲ့အခါဆို အဘက တစ်ဝက်လောက် ချန်ထားတတ်ပါတယ် ပြီးတော့ အမေ ဟင်းချက်တဲ့နားသွားပြီး * အဖွားကြီး...ရော့ သောက်လိုက် အေးပြီး ချိုနေတာပဲ*တဲ့ အမေက ကွမ်းစားထားတယ် မသောက်တော့ဘူးဆိုရင် ရော့ပါဆိုပြီး အတင်းကို ထပ်တိုက်တတ်ပါတယ်း) ကျနော်ကတော့ ကြည့်ပြီး ရယ်ချင်သလိုလို ။
ဖုန်းပြောတဲ့ အခါတွေလည်း ရယ်စရာက ကြုံရသေး တကယ်တော့ အဘက သနားဖို့ကောင်းတာ ဖုန်း တွေ တီဗွီတွေဆိုတာ သူနဲ့မှမရင်းနှီးတာ အဲ့တော့ သားတွေ တူ/တူမတွေက အဘ နဲ့ ဖုန်းပြောချင်လို့ပါ ဆိုရင် ငါ နားယားတယ် မကြားရဘူးဆိုပြီး မပြောပါဘူး အဲ့ကျ အမေက ဟင်းးးနော် ဆိုမှ အဘမှာ မကြားတကြား နားစိုက်ပြီးပြောရတယ် ပြီးတော့ စကားကို မကြားရဘူးထင်ပြီး အကျယ်ကြီးပြောပါတယ် * အဲ့ အဘ တိုးတိုးပဲပြော ဟိုကကြားရတယ် ဘေးခန်းတွေ အားနာစရာ * ဆို မှ တိုးတိုးပြောလည်း ကြားရတယ်လားတဲ့း) ပြီးတော့ ဖုန်းရှိရင် အချိန်မရွေး ဆက်လို့ရတယ်ထင်နေပါတယ် ဖုန်းပိုက်ဆံဖြည့်ရတယ်ဆိုတာ မသိဘူး *ဟား...ဖုန်းရှိပြီး ပိုက်ဆံဖြည့်မှ ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ မင်းတို့ဟာကလည်း မဟုတ်သေးပါဘူးကွာ ဒါနဲ့ ဒီဖုန်းထဲကို ဘယ်လို ပိုက်ဆံထည့်တာလဲ* တဲ့ ။
အမေက တစ်နေ့တစ်နေ့ ချက်ပြုတ် လျှော်ဖွတ် အဘက ခလေးထိန်း တစ်ခါတလေ ခလေးတွေက လမ်းထွက် ရေကူးဆိုရင် အဘက လိုက်မနိုင်တော့ဘူးလေ အဲ့ကျ အမေက * ငပေါရေ..* ဆိုပြီး မဆုံးသော သံစဉ်တွေ ဆိုးကျူးတတ်ပါတယ် ကျနော်က အမေရယ် အဘလည်းမောပြီပေါ့ ဆိုမှ ငြိမ်တယ် အဘကတော့ တစ်ခါမှကို ပြန်မပြောဘူးရယ် မောတယ်ဆိုလည်းမောတယ်ပေါ့ အမေ့ကို အဲ့လောက်ထိ ချစ်တဲ့အဘ ။ တစ်နေ့ ဘဲဥ ချဉ်ရည်ဟင်း ချက်စားတယ် ကျနော်ရုံးပြန်တော့မှ ထမင်းစားတော့ ဟင်းက အရမ်းငန်နေတယ် အမေ ...ဟင်းက ငန်လိုက်တာကော ဆိုမှ ဟုတ်လားဆိုပြီး အမေက ဟင်းမြည်းကြည့်တယ် အဲ့တော့မှ အမေ သတိရတာ မေ့ပြီး ဆားကော ၊ ငံပြာရည်ပါထည့်မိသွားတယ်တဲ့ အဲ့အချိန် အဘ က ထမင်းစားပြီးပါပြီ တကယ်ဆို ဟင်းငန်ရင်လည်း ငန်တယ်ပြောပေါ့ မပြောဘူးရယ် အရင်ကလည်း အဲ့တိုင်းပဲ အမေ ချက်ထားရင် ငန်ငန်တူးတူး ဒီတိုင်းကိုစားတာ အဲ့တော့မှ အမေလည်း အဘကိုသနားပြီး * ပြောပါတော့လားဟယ် ငါ တစ်ခြားဟာ လုပ်ပေးမှာပေါ့ * ဆိုတော့ ဟင်းတွေ နှမြောလို့တဲ့ ဖြစ်ရလေ အဘရယ် ။
ကျနော် ရုံးသွားခါနီးကျ စက်ဘီးတွေ ထုတ်ပေး ၊ အိတ်တွေထုတ်ပေးနဲ့ မလုပ်နဲ့ဆိုလည်း ပျင်းလို့ဆိုပြီး လုပ်ပေးတတ်တယ် ။ * သား အဘကို အောက်စက်ဖွင့်တာပြပေးခဲ့အုံး ဖွင့်ပေးမယ့်သူမရှိတော့ နေ့နေ့ ပျင်းတယ်ကွ ဇတ်ကားလေး ဘာလေးကြည့်ရအောင်* ဆိုတော့ ကျနော်လည်း ပြပေးခဲ့တယ် ဒါမယ့် နောက်နေ့ကျ အဘက မေ့ပြန်ကော * နှိပ်တာတော့ နှိပ်တာပဲကွ ဘာမှမပေါ်လာဘူး* တဲ့း) အဲ့တော့ ဘေးအိမ်က ကျောင်းသားလေးကို ခေါ်ပြီး ဖွင့်ခိုင်းရတယ် ။ကျနော် ဈေးသွားမယ် ဘာမှာမလဲဆိုရင် ကွမ်းသီးနဲ့ ကွမ်းပဲ မှာတယ် ။ ပြီးတော့ စိုးမြတ်သူဇာ ဇတ်ကား ကောင်းကောင်းလေးတွေ့ရင် ၀ယ်ခဲ့အုံး တဲ့ အဘ ကအဲ့မင်းသမီးဆို သိပ်ကြိုက်ပါတယ် သိပ်တော်တဲ့ မင်းသမီး တဲ့ အမေကတော့ ဖြူဖြူကျော်သိန်း ကိုကြိုက်တယ် အခွေသစ်ထွက်၇င် ၀ယ်ခဲ့ဖို့မှာတယ် အမေက သူ့ကို ဘယ်နားကြိုက်တာတုန်းဆိုတော့ သူစင်ပေါ်မှာ ဟိုသွားဒီသွား လုပ်တာက ဆန်းတယ်တဲ့ သူတို့အကြိုက်တွေကတော့ တစ်မျိုးစီပေမယ့် အဘ အကြိုက်ကို အမေက ကြိုက်သလို အမေ့အကြိုက်လည်း အဘက ကြိုက်လိုက်တာပါပဲ ။
ကျနော်ကတော့ ကျနော့်မိဘနှစ်ပါးကို ယှဉ်လျှက်စီးဆင်းနေသော မြစ်နှစ်စင်းလို့ တင်စားကြည့်ချင်ပါရဲ့ ။ ဘယ်တော့မှ သွေးဖယ်ကြမှာမဟုတ်လို့ပါ အဘက အမေ ဘာပြောပြော နာခံသလို အမေက အဘရဲ့ ဆိုးမွေးကောင်မွေတွေကို မငြီးမငြူလက်ခံခဲ့တာပါပဲ တစ်ခါတလေ အမေက အဘကို လက်သည်းခြေသည်း ညှပ်ပေးတာမျိုး ၊ ဆေးလူးပေးတာမျိုးလေးတွေ မြင်ရတဲ့အခါ ၀မ်းသာပီတိ ဖြစ်လွန်းလို့ မျက်ရည်ဝဲမိပါတယ် ပြီးတော့ ကျနော်ရဲ့ ပင်ပန်းခြင်းတွေတွေကိုလည်း ဖြေသိမ့်နိုင်ခဲ့တယ် ။ ကျနော့်ရဲ့ အိမ်ပြန်ချိန်တွေကို စောင့်မျှော်နေတတ်တဲ့ မိဘနှစ်ပါး ။ ထမင်းစားချိန်တိုင်း * သား...စားတော့မလား အမေ ထည့်ပေးမယ်* ဆိုတဲ့ အမေ့ရဲ့ ဂရုစိုက်မှု အသားဟင်းတွေမဟုတ်ပေမယ့် ကျနော့် ထမင်းမြိန်တယ် ။ မနက်အိပ်ယာထချိန် အပျင်းကြီးတဲ့ ကျနော့်ကို* ကောင်လေး...ထတော့ နောက်ကျနေပြီကွ* ဆိုပြီး ခြင်ထောင်ကြိုးဖြုတ်လို့ အတင်းနှိုးတတ်တဲ့ အဘ ကျနော့်အတွက်တော့ တန်ဖိုးဖြတ်မရတဲ့ ဂရုစိုက်ခံရမှုတွေပါပဲ ။ ဒီအခွင့်ရေးတွေနဲ့အတူ မိဘကို ဒီ့ထပ်စောင့်ရှောက်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလျှက် ..... ကျနော့်နေ့ရက်တွေ အဓိပ္ပါယ် ရှိစွာဖြတ်သန်းနေပါတယ်ဆိုတာ ။
FB က မိတ်ဆွေတွေကတော့ ဓာတ်ပုံတွေမြင်ဖူးကြတယ် ဘလော့က သူတွေတော့မမြင်ဖူးကြသေးဘူးထင်လို့အဘရဲ့ ပုံပါတင်ပေးလိုက်ပါတယ် အထူးသဖြင့် အစ်ကိုညီလင်းသစ် ၊ အစ်မမေဓာဝီ တို့ပေါ့း)
၀ါဆိုလပြည့်နေ့က ဘုန်းကြီးကျောင်းမသွားခင် ရိုက်ထားတဲ့ အမေ နဲ့ အဘ ရဲ့ပုံပါ ။ တစ်ချို့ကတော့ပြောတယ် မောင်မျိုး အဘ က မောင်မျိုးလို ပျော့တိပျော့ဖတ်မဟုတ်ဘူး တဲ့း)
FB မှာ စိုးမြတ်သူဇာနဲ့ ဖြူဖြူကျော်သိန်း တစ်ပိုဒ် ကျန်ခဲ့တယ်ထင်တယ်.. ညောင်မျိုးရေ....
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အဘနဲ့အမေနဲ့ သားအငယ်ဆုံးလေး... :)
ညီ့ဆီက ဒါမျိုး ပို့စ်လေးတွေ မဖတ်ရတာ ကြာနေပြီဗျ..၊ အရမ်းသဘောကျတယ်၊ အမေက အဘကို ချည်ပြီးတုပ်ပြီး တခါတည်း ပြောလိုက်တာ မိုက်တယ်၊း) သားသမီးတွေကို ချစ်ပြီး ဘဝကို ရိုးရိုးစင်းစင်း ဖြတ်သန်းနေကြတဲ့ အဘနဲ့အမေက ချစ်စရာ ကောင်းတယ်၊ သူတို့အကြောင်း ဘယ်လောက်ဖတ်ဖတ် မရိုးရဘူး၊ နောင်ကိုလည်း ဆက်ရေးပါအုံး ညီရေ..၊
ဓါတ်ပုံထဲက အဘက မေးရိုးခိုင်ခိုင်နဲ့ လောကဓံကို မမှုတဲ့ပုံ ရှိသလို အမေကလည်း ထက်မြက်တဲ့ မျက်ဝန်းတွေနဲ့..၊ ဟိုးအနောက် နံရံပေါ်မှာလည်း သူ့အမေကို ကပ်ချွဲနေတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ပုံ လှမ်းတွေ့လိုက်သေးတယ်..။း)
ဖတ်ရတာ ကြည်နူးစရာလေးပါ.. မောင်မျိုးလည်း အဘလို ဇနီးကောင်းတစ်ယောက်ရပါစေး)
ငါ့ညီ မောင်မျိုး . . . မိဘကို အမြဲ လုပ်ကျွေးပြုစု စောက်ရှောက်တဲ့ကောင်ကြီး . . . ဒီထက်မက မင်းကြီးပွား ဦးမှာ ငါမြင်ယောင်သေးတယ် ငမျိုးရာ . . .
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မောင်မျိုးရဲ့အဖေနဲ့အမေ ရယ် သားလိမ္မာလေးမောင်မျိုးရယ် ဘဝကပျော်စရာကြီးရယ်နော်
ရဲ့လို့ ပြောရတယ်...:)၊အောက်စက်ဆိုလည်း တစ်
အမြဲလာလည်ပေမယ့် ကွန်မန့်မပေးဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ဒီပိုစ့်လေးဖတ်ရတာ စိတ်ထဲကြည်နူးလို့ အခုတော့ ချရေးဖြစ်တယ်။ အဘက စိုးမြတ်သူဇာကြိုက်ပီး အမေက ဖြူဖြူကြိုက်သတဲ့။ အဘနဲ့ အမေက ခေတ်မီသား။
ဒီအသက်အ၇ွယ်ထိ ကျန်းမာတဲ့မိဘတွေနဲ့ အတူနေခွင့်ရတာကကို လာဘ်ကြီးတစ်ပါးပါပဲဗျာ။
မောင်မျိုးတို့ မိသားစုအကြောင်း ဖတ်ရတာ မရိုးနိုင်ဘူး
ရိုးသားတဲ့ အရိပ်အငွေ့တွေနဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းကြတယ်။
အဖေနဲ့ အမေရဲ့ ကြင်နာဟန်လေးတွေက ကြည်နူးမှုကို ဖြစပေါ်စေတယ်ကိုမျိုး... ခုလိုမျိုး အနားမှာခေါ်ထားပြိး စောင့်ရှောက်ခွင့်ရတာလေးလည်း အားကျစရာ....
မောင်မျိုး မိသားစု အကြောင်းလေးတွေ ဖတ်ရတာ ကြည်နူးမိတယ်..အဘက သဘောကောင်းမဲ့ပုံ၊ မောင်မျိုးအမေက ထက်မဲ့ပုံ..အင်း သီတင်းကျွှတ်လို့အဘနဲ့ အမေပြန်ရင်တော့ မောင်မျိုးတယောက် ငေါင်တောင်တောင် ဖြစ်နေတော့မှာပဲ..
၀မ်းသာပီတိ ဖြစ်လွန်းလို့ မျက်ရည်ဝဲမိပါတယ်
(copy and paste from post)
အရမ်းချစ်စရာကောင်းပြီး ရိုးရှင်းတဲ့ မိသားစုဘ၀လေးပဲ .. စိတ်ချမ်းသာတယ် .. ဦးနဲ့ အန်တီ စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာစွာနဲ့ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာ ထာဝရ နေထိုင်သွားနိုင်ပါစေး)) နေသွားနိုင်မယ်လည်း ယုံကြည်နေပါတယ် ..
ပီအက်စ် - နင့်စာတွေဖတ်ပြီးရင် နင့်မိသားစုနဲ့ အပြင်မှာ တွေ့ဘူးချင်တယ် .. တော်တော်ပျော်စရာကောင်းမယ် .. နင်တို့ ရွာရောပဲ ရောက်ဖူးချင်ပ